के तपाईको ब्लड प्रेसर लो छ ? त्यसो हो भने अपनाउनुहोस् यी उपाय – MediaNP
काठमाडौँ । अस्तव्यस्त खानपान र परिवर्तनशिल दैनिक जीवनयापनको कारण पछिल्लो समय मानिसमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु देखिन थालेका छन् । अस्तव्यस्त दिनचार्यको कारण खानपानमा राम्रो ख्याल नगर्दा रक्तचापमा समस्या आउने गर्छ । शरिरमा सामान्य भन्दा बढी रक्तप्रबाह भएको छ भने त्यसलाई न्यून रक्तचाप भन्ने गरिन्छ ।
सामान्यतया न्यून रक्तचाप भनेको १२० । ८० हुन्छ । त्यसकारण ९० भन्दा कम हुनुलाई ब्लड प्रेसर लो भन्ने गरिन्छ । यस्तो समस्या भएको बेला शरिरको अंगहरुमा ब्लड प्रेसर पुग्न पाउँदैन् । जसले गर्दा शरिरको अंग सञ्चालनमा समस्या आउछ । यस्तो अवस्थामा मुटु, मृगौला, कलेजो तथा दिमागले पुरै काम गर्न बन्द हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसकारण प्रेसर लो भएको बेला स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल पुर्याउनुपर्छ ।
१.नुन पानी पिउने : यदि प्रेसर लो भएको छ भने नुनपानीले महत्वपूर्ण काम गर्छ । नुन पानीले प्रेसरलाई सामान्य बनाउँछ । नुनमा हुने सोडियमले प्रेसरलाई बढाउँछ । त्यसकारण स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरेर नुन प्रयोग गर्नुपर्छ ।
२.क्याफिनको सेवन : कफी ब्लड प्रेसर हटाउने मुख्य उपाय हो । ब्लड प्रेसर कम हुँदा स्ट्रक कफी हट चक्लेट, क्याफिनयुक्त खाद्ययपदार्थको सेवन गर्नुपर्छ । जसबाट रक्तचाप सामान्य हुन्छ । सधै यस्तो समस्या हुने व्यक्तिले दिनहुँ एक कप कफी पिउने गर्दा राम्रो हुन्छ ।
३.किसमिस खाने : किसमिस लाई प्रेसर बढाउने आयुवेर्दिक औषधीको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रेसर लो भएको बेला राती ३० देखि ४० वटा किसमिसलाई पानीमा भिजाएर बिहान खाली पेटमा खाने । पानीको सट्टा दूध पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसको अलवा देशी बदामको प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ । यसले उच्च रक्तचापलाई सामान्य राख्छ ।
४. तुलसी : तुलसीले उच्च रक्तचापलाई सामान्य राख्छ । दिमागलाई सन्तुलनमा राख्नुको साथै तनावबाछ मुक्त पार्छ । जुसमा तुलसीको १० देखि १५ वटा पता राखेर त्यसमा एक चम्चा मह मिसाएर खाी पेटमा पिउने गर्दा अवस्था सामान्य बन्छ ।
५.कागतीको रस : भिटामीन सी पाइने कागतीे प्रेसरलाई सन्तुलनमा राख्ने काम गर्छ । कागतीको रस हल्का नुन र चिनी राखेर पानी पिउने गर्दा शरिरमा इनर्जी प्राप्त हुन्छ । यसले कलेजोलाई पनि स्वस्थ राख्छ ।